Ayehla amanani kaphethiloli | News24
Ayehla amanani kaphethiloli
Johannesburg - Abashayeli bezimoto bathola ukuphefumula ngoLwesithathu njengoba amanani kaphethiloli ezokwehla ngo-25 cents ilitha kuzona zombili izinhlobo.
Amanani kadizili wona azokwehla ngo-23 cents ilitha kuthi akaphararini wona ehle ngo-22 cents ilitha.
Lokhu kusho ukuthi amanani kaphethiloli wohlobo lwe-95 octane asezobiza u-R13.54 ilitha esifundazweni iGauteng, akadizili azobiza u-R11 57 ilitha kusona lesi sifundazwe, kusho uMnyango wezaMandla esitatimendeni.
OLUNYE UDABA: Awuthi vu uToyota ngesiteleka esidalwe abamatekisi
Ukwenyuka kwamani kaphethiloli ngokwedlule kubenomthelela ongemuhle emabhizinisini, ngokusho kwesikhulu esiphezulu seSouth African Chamber of Commerce and Industry, u-Alan Mukoki.
UMnyango uthi ukwehla kwamanani kaphethiloli kudalwe ukwehla kwamanani kawoyela emhlabeni nokuqina kwerandi uma liqhathaniswa nedola kusukela.